Budata BSPlayer maka Windows
Free Budata maka Windows (10.50 MB)
BSPlayer bụ ọkpụkpọ mgbasa ozi ama ama nke nwere ike ịkpọ faịlụ ọdịyo na vidiyo niile dịka AVI, MKV, MPEG, WAV, ASF na MP3. Nime isi ihe kpatara ịhọrọ mmemme a bụ njirimara dị ka iwepụta obere oghere, imeghe ngwa ngwa, na nkwado interface Turkey.
Otu esi etinye BSPlayer?
Ihe omume a, nke nwere ndepụta okwu nkwado maka DivX na XviD, na-enye nkwado akpụkpọ anụ na nhọrọ, na ebe ị nwere ike ịhazigharị nha nha na nha nha, nwere ụdị free yana nsụgharị akwụ ụgwọ maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ.
BSPlayer, nke na-enye gị ohere ịme mgbanwe niile metụtara codec site na ihe ọkpụkpọ, na-enye nkwado zuru oke maka iji ndepụta okwu. Na mgbakwunye, ịnwere ike iji ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi a kpọọ faịlụ vidiyo niile, gụnyere DVD, nke na-enye ohere ịme ọtụtụ arụmọrụ site na keyboard ma na-enye gị ohere iji isiokwu dị iche iche.
Mmemme nwekwara ike ibugharị na onyonyo a. Ọzọkwa, ihe mgbakwunye gụnyere nkwado Winlirc; Nụzọ dị otú a, ị nwere ike ijikwa remote gị jikwaa BSPlayer ngwa ngwa.
Nkwado ndepụta ọkpụkpọ
Ngosipụta ndepụta okwu
BS.Media Library (ọbá akwụkwọ mgbasa ozi)
Nhọrọ ọtụtụ asụsụ
Ohere vidiyo enwere ike ịgbanwe
Dọrọ & dobe Nkwado
Ikike ịgbanwe mkpebi
Akpụkpọ ahụ nwere ike ịhazi ya nke ọma
Nkwado ọdịyo faịlụ mpụga
Ịtọ ntọala ihe nkiri na faịlụ INI
Eji Ngosipụta Desktọpụ na-egwu ihe nkiri na ndabere gị
Ụdị ịkpọghachi nkeonwe
Nha faịlụ: 10.50 MB